တို.ဟူး စမ်းလုပ်ကြည့်ပါတယ်။ ဟဲဟဲ လွယ်သလားတော့မမေးနဲ. စားလို. ကောင်းလားတော့ မမေးပါနဲ.။ မကောင်းလို.ပါ။ ဖြစ်တော့ ဖြစ်သွားပါတယ် သို.ပေမဲ. ပေါ့လေ ဘာတွေလိုသွားလဲတော့မသိ ပါဘူးရှင်။
Posted by This is about... at 9:46 PM3comments:
ဆောင်းကိုမုန်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆောင်းရဲ.အလှကို မြတ်နိုးမိပါတယ်။ ကြည့်ပါဦး ရက်ရက်စက်စက် လှနိုင်လွန်းတဲ့ ဆောင်းကို။ အဲဒီနေ.က ICY snow တဲ့။ ကင်မရာမေ့မှာ စိုးလို. ကျောင်းနောက်ကျနေတဲ့ကြားက ဓါတ်ပုံတွေ အမှီရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလောက်လှတဲ့ ဆောင်းက လူသတ်ရတာ ၀န်မလေးဘူး ဆိုယုံကြမလား? လမ်းမတွေပေါ်မှာ ရေတွေခဲ ပြီးလမ်းတွေချော်လို. High Way ပေါ်သွားလာကြတဲ့ လူတွေ မတော်တစ်ဆမှုတွေ နဲ. ပျက်စီးကြရတယ် ဆိုတဲ့သတင်းတွေက TVပေါ်မှာပလူပျံလို.။ အလွမ်းအိမ်ကိုယ်တိုင် တောင်မသေကောင်း မပျောက်ကောင်း နှင်းပုံကို ၀င်ဝင်တိုးမိသေးတာ High Way ပေါ်မှာ အရှိန်နဲ.သွားလာနေရ တဲ့လူတွေခမျာ အသက်ကို ဖက်နဲ.ထုပ် ထားလို. ကြောက်ဒူးတွေတုန် နေမှာမလွဲပါ။ လှလွန်းတဲ့ အရာတွေမှာ မာယာတွေ ရှိတတ်သလား လို.အလွမ်းအိမ် တစ်ခါတစ်လေ မေးခွန်းထုပ်မိပါရဲ.။
Posted by This is about... at 1:57 PM 1 comment:
ဆူရှီးလိပ်နေပါသည်။ တစ်နေ.တစ်နေ. လှုပ်ရှားရင်း ရုန်းကန်ရင်းနဲ. ဘ၀ အတွက်အမောပြေစရာ ဟာသလေးများလဲ မြင်ဖြစ်အောင် မြင်တတ်အောင်ကြည့်ရင်းက မှတ်မှတ်ရရ လေးများကို မှတ်တမ်းတင်ပေးလိုက်ပ်တယ်။ အလွမ်းအိမ်တို. ဆူရှီးလောကမှာ ၀ါဆာဘီး wasabi ဆိုတဲ့ အစိမ်းနုရောင် ပစ္စည်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီပစ္စည်းဟာ အလွန်တရာမှ မွှန်ပြီး ပူပါတယ်။ ဂျပန်တွေက ငါးစိမ်းတွေစားတဲ့ အခါပိုးသေအောင် ၀ါဆာဘီးလေး နဲနဲစားပေးတယ် လို.အလွမ်းအိမ်မှတ် ဖူးပါတယ်။
တစ်နေ.တော့ အလွမ်းအိမ်လဲ နေ.လည်စာစားချိန်မှီအောင် ဆူရှီးကို အပီအပြင်လိပ်နေတုန်း ၀ါစာဘီးကို ကိတ်မုန်.ပေါ် မှာခရင် အလှဆင်တဲ့ ပိုက်နဲ.ညှစ်ပြီး ဘူးထဲကိုထည့် နေတုန်း "မာမီ အိုက်စခရင်" ဆိုတဲ့အသံကို ကြားပါတယ်။ ၃နှစ်အရွယ်လောက် ရှိတဲ့ခလေးတစ်ယောက် သူ.မာမီကို အလွမ်းအိမ်ရဲ. အလွန်တရာမှ လှပတဲ့ ၀ါဆာဘီးကို အိုက်စခရင်အမှတ်နဲ. ၀ယ်ကျွေးခိုင်းနေပါတယ်။ မာမီက အဲဒါ အိုက်စခရင်မဟုတ်ဘူး လဲဆိုရော "ဗြဲ" တဲ့။ အလွမ်းအိမ်လဲ နဂိုကမှ အားနာတတ်ပါတယ်ဆို သူက ဗြဲ ဆိုတော့ ၀ါဆာဘီးအိတ်ပဲ ထိုးပေးရတော့မလို၊ ခွက်ထဲပဲခပ်ပေးရတော့မလို၊ ခလေးစားလို.မရဘူး ပူတယ် လို.ပဲ ထပြောရတော့မလို နဲ. အူကြောင်ကြောင်ရပ်နေမိပါတယ်။ တော်သေးဧ။် မာမီက ကလေး ကို အတင်းလက်ဆွဲခေါ်သွားပေလို. ။
Posted by This is about... at 7:31 PM No comments:
ကင်မချီ (kimchi) လုပ်နည်း
ဟိုတစ်လောက ဒေါ်လွမ်းလွမ်း တို. လျှာရှည်တော်မူပြီး အခန်းဖေါ်ကိုရီးယားမ နဲ.အတူ ကင်မချီ လုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒါ ကင်မချီ လုပ်နည်းကို ဖေါက်သည် ချလိုက်ပါတယ်။
၁။ မုန်ညှင်းဖြူ ထုပ်ကို အခုလို ထက်ခြမ်းခြမ်းပါ။
၃။ ဆားပွင့် အကြီးကြီး တွေကို ခုလို မျိုးဆားနဲ.အလွှာတွေ ကြားထဲကို ထည့်ပေးပါ။
၄။ ပြီးရင်ခုလိုမျိုး ဇလုံထဲမှာ ၈နာရီလောက် ပစ်ထားလိုက်ပါ။
၅။ ၈နာရီလောက် ကြာရင် ခုလိုမျိုး မုန်ညှင်းရွက် တွေနွမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါကျရင် ရေနဲ. သေချာဆေးပစ်ပါ။ မဟုတ်ရင် တစ်အားငံပါလိမ့်မယ်။
၆။ ကောက်ညှင်းမှုန်.တွေကိုရေနည်းနည်း ထည့်ပြီး ပြစ်လာတဲ့ အထိ ကြိုပါ။
၇။ ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ ကို အခုလိုမျိုး ခြစ်ပေးပါ။ ထောင်းလို.လဲရပါတယ်။
၈။ ကြက်သွန်နီကိုလဲ လှီးထားပါ။
၉။ ကြက်သွန်မြိတ် အဖြူနဲ.အနီလဲ ထည့်ရပါတယ်။
၁၀။ ငြုတ်သီးမှုန်. ကို ၁ခွက် ချင်ပြီး အစောနက ကြက်သွန် နီ၊ ဖြူ မြိတ်တွေနဲ. ရောပါ။ ကြက်သွန်နီ လှီးထားတာတွေလဲထည့်ပါ။ ကြက်သွန်နီ၊ဖြူထောင်းထားတာတွေလဲထည့်ပါ။
၁၁။ ငံပြာရည်၊ ဆားနဲနဲ၊ သကြားနဲ. ကြိုထားတဲ့ ကောက်ညှင်းမှုန်. ရည်တွေပါရောပြီးအားလုံးကို နယ်ပါ။
၁၂။ ပြီးရင် မုန်ညှင်းတွေထဲကို တစ်လွှာချင်းဆီ ပွတ်ပြီး သိပ်ပေးပါ။
၁၃။ ပြီးတာနဲ. ပုလင်းထဲကို အခုလိုပဲ အပြည့်သိပ်ထည့်ပေးပါ။
၁ရက်လောက်နေရင် အရည်တွေထွက်ပြီး ပုလင်းထဲက လျှံထွက်တတ်တာမှို. သတိထားစောင့်ကြည့်ပေးပါ။ ပူတဲ့ရာသီမှာဆို ရင် လုပ်ပြီးတာနဲ. ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားလိုက်ပါ။ အချဉ်ကြိုက်တတ်ရင်တော့ အပြင်မှာ နေ.၀က်လောက်ထားပါ။ အလွမ်းအိမ်ကတော့ အချဉ်ကြိုက်တာရယ် အလွမ်းအိမ် နေတဲ့နေရာက အေးတာရယ်၊ မေ့သွားတာရယ် အားလုံးပေါင်းပြီး အပြင်မှာ ၃ရက်လောက် ကြာသွားလို. ချဉ်မှချဉ် ဖြစ်သွားပါတယ်။
Posted by This is about... at 1:53 PM2comments:
ယခုစာသင် ရာသီ သတင်းအကျဉ်းချုပ်
ကျန်းမာတော်မူ စပါကြရှင်။ ယနေ. သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၄ရက် အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက် သတင်းများကို ကြေငြာပါတော့မယ် ရှင်။
သတင်းခေါင်းစဉ်.... ဒေါ် အလွမ်းအိမ်တို. အိုးဖုတ်နေသည်။ ဟုတ်ကဲ့... ယခုစာသင်ရာသီတွင် အိုးဖုတ်သင်တန်း တက်ဖို. အကြောင်းဖန် လာပါသည်။ အနုပညာ အလွန်.အလွန် ကျွမ်းကျင်သော မရွှေလွမ်းသည် လျှာတစ်တောင်လောက် ရှည်ကာ အိုးဖုတ်သင်တန်း ကိုစာရင်းပေးမိသည်။ ပင်ဂွင်းလုပ်လျှင် ဘဲရုပ်ဖြစ်သည်။ ဒိုင်နိုဆော လုပ်ပါက လိပ်ပြာဖြစ်သည်။ အိုးလုပ်ပါက ပန်းကန်ဖြစ်သည်။ အလွန်တော်ပါသည်။ အဆင့် ၁ထက် ကောင်းသော အဆင့်0နှင့်ပင် ထိုက်တန်ပါသည်။
အလွန်.အလွန်မှ အရှက်သည်းလှသော ဒေါ်ရွှေလွမ်းသည် လူမှုဆက်ဆံရေး ဘာသာရပ်ကို ယူမိပါသည်။ ထိုဘာသာ အချိန်ရောက်လျှင် အာစေးထည့် ထားသကဲ့သို. ပါးစပ်မှာ ဖွင့်၍မရပါ။ ဆရာမက ပါးစပ်ကို ဆောက်နှင့်လာထွင်း တောင်ပွင့်မဲ့ပုံ မပေါ်သော အလွမ်းအိမ်ကို လက်ကောခြေထောက်ရော မြောက်သွားသည်။
ယခုဆက်လက်ပြီး ကောလိပ်အတွင်းမှ ရာသီဥတု ခြေနေများကို အစီအရင်ခံပါဦးမည်။
အရှေ.အရပ် ကားပါကင်တွင် မုတ်သုံ မုန်တိုင်းတိုင်ခတ်သွားပါ သဖြင့် ပါကင်တစ်ခုလုံး ချိုင့်များ ခွက်များနှင့်ပြည့် နှက်နေပါသည်။ ထိုမုတ်သုံ မုန်တိုင်းကြီးသည် တောင်အရပ် ကျောင်းကောင်စီ ရှိရာသို. ဆက်လက် ဦးတည်နေပြီး ကားပါကင်ပြင်ရန် ဘတ်ဂျက် ဥသြောသံပေးနေပါသည်။ အလှူငွေ မရှိသောကြောင့် ချိုင့်များ ခွက်များကို သဲများဖြင့်ဖို. ရန်စီစဉ်နေပါသည်။
ကောလိပ်၏ Sociology ဌာန အရပ်၌ မိုးခေါင် ရေရှားနေပါသောကြောင့် ဆရာ၊ဆရာမ များရေရှာနေပါသည်။ Sociology ဌာန အရပ်ကို ရှောင်ကျဉ်ကြပါရန် သက်ဆိုင်ရာမှ သတိပေးနှိုးဆော်ထားပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာ ဌာန၌ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေများကြီးကာ ၀မ်းပျက် ၀မ်းလျှော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနေပါသော ကြောင့် နဂိုကမှ ချောင်ချင်နေသော ဆရာ/မ များသည် သွက်သွက်ခါသွားပါသည်။ ထို.ကြောင့် သင်ချင်သည်များကို သင်ကာ မသင်ချင်သည်များ ကို မသင်ပါ။
ဤတွင် သတင်းများကို ကြေညာလို. ပြီးပါပြီ။ ကိုယ်စိတ်နှဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာတော် မူကြပါစေရှင်။
Posted by This is about... at 5:44 PM No comments:
ကျွန်မ တို.မောင်နှမ နှစ်ယောက် အမေ့ထက် လူလုံးနှစ်ဆ လောက်ကြီးလာတဲ့အထိ အမေဘယ်လိုများ ပင်ပင်ပန်းပန်း ကျွေးမွေးလာပါ လိမ့်လဲနော်။ အမေ ကျွန်မမှတ်မိသေးတယ်၊ ကျွန်မတို.ငယ်ငယ် တုံးကပေါ့ ကျွန်မတို. မိသားစု စားနိုင်သောက်နိုင်လောက်ပဲ ပိုက်ဆံရှိခဲ့တယ်လေ။ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း နဲ.ရုန်းကန်ခဲ့ ရတုန်းက အမေက ကျွန်မတို. မောင်နှမကို "သားတို. သမီးတို. အားမငယ်နဲ. အမေရှိရင် ငွေရှိတယ်။ အမေ မင်းတို.ကို ပိုပိုလျှံလျှံမ ထောက်ပံနိုင်ပေမဲ့ မျက်နှာမငယ် စေရဘူး။" အမေ... မောင်လေးငယ်ငယ် တုံးက အမေနို. မထွက်လို. ပိုက်ဆံမရှိမဲ့ ရှိမဲ့နဲ. ၀ယ်ထားတဲ့ နို.မှုန်. ဘူးတွေ အတုမိလို. အမေ နို.မှုန်. ဘူးတွေ ဘေးမှာ ထိုင်ငိုနေခဲ့ တာကို သမီးလှေကား ထောင့်ကနေ ချောင်းကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ သနားစရာကောင်းလိုက် တဲ့အမေရယ်။ အမေ... ကျွန်မတို. အတန်းကြီးလာတာနဲ. အမျှကြီးလာတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ. အမှီ၊ ကျူရှင်ဖိုး ဘာဖိုးညာဖို.တွေ အတွက် အမေ မနက် ၄နာရီကနေ ည၉နာရီလောက် အထိ အလုပ်လုပ် ပြီးသားတွေသမီးတွေ အတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ ဘစ်စကား ကြပ်ကြပ်တွေထဲမှာ ငါ့အမေ မွန်းကြပ်နေရှာရော့မယ်။ အမေ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ အမေ ကျွန်မ အရွယ်ရောက်လာတော့ အမေ့ရှေ.မှာ မားမားမတ်မတ်ရပ် ပြီးအမေ့ကို ကာကွယ်မယ်မှ မရှိသေးဘူး၊ ကျွန်မ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာကို ရှာခဲ့တယ် အမေ။ အမေ ပြုံးပြီးလက်ခံခဲ့တယ်။ အမေ ကျွန်မဆီ ငွေပို.မပျက်ခဲ့ဘူး။ အမေ... ကျွန်မ အမေ့ကို လွမ်းတယ်။ အမေ... ကျွန်မအပေါ် နားအလည် တတ်ဆုံးအမေ... မနက်ဖြန် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ. မှာကျွန်မ အမေ့ကို ဦးချလို. ကန်တော့လိုက်ပါတယ်။
Posted by This is about... at 5:15 PM No comments:
မိုးလေတွေက သည်းထန်နေသည်။ လှိုင်းလုံးကြီးတွေက ဝေါကနဲ ဝေါကနဲ နှင့် သင်္ဘော၏ ကိုယ်ထည် အတွင်းသို. ၀င်ရောက်လာသည်။
ရေငံတွေဝင်လာတိုင်း ကုန်းပတ်ပေါ်တွင် မိရာကို လှမ်းဆွဲ ထားသော သဘောင်္သားများ၏ ပါးစပ်အတွင်းသို. ငံကျိကျိ။ သဘောင်္ဦးခန်း အတွင်းမှ May Day အော်နေသံတွေက မိုးသံတွေကြားမှာ ကွယ်ပျောက်နေသည်။ သဘောင်္ စက်ခန်းအတွင်း မှာလဲ ရေချိန်သည့် သူများက ပျားများလို အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ အော်ကြ ဟစ်ကြ ပြေးကြလွှားကြနှင့်။ သဘောင်္က စစ်ရေယာဉ် တစ်စီးဖြစ်တဲ့ အလျောက် ခိုင်ခံသည်။
ဘယ်လောက်ပင် ခိုင်ခံ သန်မာသည့် သဘောင်္ ဖြစ်ဦးတော့ ပင်လယ်ကြီး၏ ကြမ်းတမ်းမှုကို တောင့်ခံမထားနိုင်။ ကူသူကယ်သူမဲ့ သဘောင်္တစ်စင်း ပင်လယ်ထဲမှာ လူးလူးလွန်.လွန်.။ သဘောင်္တွင်းမှ လူများကတော့ ဇကောထဲ ဇီးဖြူသီး ထည့်လှိမ့်သလို တစ်လူးလူး တစ်လိမ့်လိမ့်။ နောက်ဆုံး သဘောင်္သားများ သဘောင်္ ကိုမနစ်အောင် သဘာဝအန္တရာယ်တွေကြားမှ ကျားကန်ကန် နေမှုကို ရပ်လိုက်ကြသည်။ လှိုင်းကြီးသည်။ လူအင်အားနှင့် ဘယ်လိုမှ ဆန်.ကျင်ကြိုးစား၍ မရနိုင် လက်လျော့လိုက်ကြသည်။ မှီရာကိုသာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ရင်း နစ်နေသည့် သဘောင်္အတွင်းမှ ဘုရားကိုသာတနေကြသည်။ သဘောင်္သား ၁၁ ယောက် လုံးသေမင်းကို
ထိုအချိန်မှာ စစ်ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်း ကိုမြင်လိုက်ကြသည်။ ရဟတ်ယာဉ်မှာ လေဒါဏ်ကြောင့် နောက်ကို ပြန်ပြန်ရွေ.သွားသည်။ လေယာဉ်မှူး၂ဦးမှ နစ်နေသော သဘောင်္ဆီသို. အချိန်မှီရောက်အောင် ကြိုးစားနေကြသည်။ သဘောင်္သားများ၏ မျှော်လင့်ချက်ရောင် ခြည်သန်းသော မျက်ဝန်းများက လေယာဉ်မှူးများ၏ ကြိုးစားမှုကို အဆုံးစွန်ထိ ကြိုးစားဖို. တိုက်တွန်းနေသယောင်ယောင်။ နောက်ဆုံးတွင် နစ်နေတဲ့ သဘောင်္ဝမ်းထဲသို. Co Pilot ကကယ်ဆယ်ရေး ကြိုးချပေးသည်။ လေကြီးလွန်းသောကြောင့် ရဟတ်ယာဉ်ကို ငြိမ်အောင် ဘယ်လိုမှ ထိန်းမထားနိုင် သို.သော် ကျွမ်းကျင်၍ ၀ါရင့်လှသော လေယာဉ်မှူးများ၏ ကြိုးစားမှုများကြောင့် သဘောင်္သား ၁၁ဦးလုံး အန္တရာယ် ကင်းခဲ့သည်။
Posted by This is about... at 8:20 AM No comments:
အမြဲဖတ်ဖြစ်သော blog များ...
ဖက်ရှင်ကို စိတ်ဝင်စားသူများ အတွက် fashion5ter
မင်းယွန်းသစ် ၏ တိုလီမုတ်စများ
မိုးချစ်သူ ဆိုတဲ့ မိုးရေထဲကကောင်မလေး
ရတနာစိုး ဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ ရင်ခုန်ယုံကြည်စွာဖြင့်
My lonely world....